ड’ण्डीफोरबाट सधैँका लागि छु’टकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय - Nawalpur Dainik
ड’ण्डीफोरबाट सधैँका लागि छु’टकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
February 2, 2021 by Nawalpur Dainik
ड’ण्डीफोरले अनुहारको सुन्दरता बिग्रन्छ कि भनेर मानिसहरू चिन्तित हुन्छन् । ड’ण्डीफोर निको भए पनि दागको रुपमा यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ । ड’ण्डीफोरलाई चाँडो निको बनाउने धुनमा त्यसलाई निचोर्नु नै स’मस्या निम्त्याउनु हो । फेरि त्यसको दा’गलाई हटाउने नाममा प्रयोग गरिने क्रिमले छा’लामा साइडइफेक्ट गर्न सक्छ । यहाँ ड’ण्डीफोर हटाउने घरेलु उपायको चर्चा गरिएको छ ।
ओलिभ आयल: ओलिभ आयलको केही थोपा ड’ण्डीफोरको दागमा लगाउनुस् । यसले अनुहारको र’गतमा निखार ल्याउँछ र दाग फिका हुन थाल्छ । नियमित लगाउन थालेपछि बिस्तारै दा’ग हट्दै जान्छ । आलु: आलुको टुक्रा काट्नुस् र अनुहारमा बिस्तारै रगडेर लगाउनुस् । एउटा टुक्रा सुक्यो भने अर्को लगाउनुस् । यो क्रमलाई १५ मिनेटसम्म निरन्तरता दिएपछि अनहारलाई सुक्न दिनुस् । त्यसपछि धोएर मोस्चराइजर लगाउनुस् । यो प्रयोग हप्तामा ३–४ पटक गर्नुहोस् ।
भिटामिन: खानामा भिटामिनको मात्रा बढाउनुस् । त्यसका लागि बिहानको सूर्यको किरण आफ्नो अनुहारमा पर्न दिनुस् । गोलभेंडा: गोलभेंडा काटेर ड’ण्डीफोरमा लगाउनुस् र त्यसलाई १५–२० मिनेटसम्म रहन दिएर धुनुस् । यस प्रक्रियालाई हप्तामा एक वा दुइपटक गर्नुस् ।
चन्दन पाउडर: एक चम्चा चन्दन पाउडर लिएर त्यसमा केही थोपा रोज वाटर हाल्नुस् । यो पेस्टलाई डण्डीफोरको दागमा लगाउनुस् र १५–२० मिनेटपछि धुनुस् । केही दिनमै दाग हट्न थाल्छ । कागतीको रस: ड’ण्डीफोरको दागमा कागतीको रस लगाउनुस् र सुक्न दिनुहोस् । त्यसपछि पानीले धुनुस् । यो प्रयोग साँझमात्र गर्न सक्नुहुन्छ। दिउँसो कागतीको रस लगाउने हो भने सनस्क्रीन लोसन अवश्य लगाउनुस् ।
खाने सोडा: फेसवासमा एक चिम्टी खाने सोडा मिसाएर लगाउनुस् र चिसो पानीले अनुहार धुनुस् । यसबाट छा’लामा थोरै झनझनाहट हुन्छ। छालाका क्लिनिकमा छा’लामा चमक ल्याउन यो उपाय अपनाइन्छ । तर यसलाई अनुहारमा २० सेकेण्डभन्दा बढी नराख्नुस् । मह: एउटा माटोको भाँडोमा मह र घिउकुमारी मिसाउनुस् । त्यसमा केही निमको पात क्रस गरेर राख्नुस् र त्यसलाई एक दिनभरका लागि चिसो स्थानमा राख्नुस् । अर्को दिन त्यसमा गुलाब जल मिसाएर ड’ण्डीफोरमा लगाउनुस् र सुकेपछि धुनुस् । यो प्रक्रिया दिनहुँ गरेपछि डण्डीफोरको दाग मेटिनेछ ।
ज’मेको काने गु’जीलाई निका’ल्न चा’हानुहुन्छ ? यो विधि अप’नाउनुहोस् सुन्ने श’क्ति बढ्छ दुई गु’ण ! शरीरको साथसाथै, का’न सफा गर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । मानिसहरू प्राय जसो आफ्नो शरीर सफा गर्दछन् तर कान सफा गर्न बिर्सन्छन् । कान सफा नगर्दा, कुनै पनि व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ । कान सफा नगर्दा ठूलो रो’गलाई निम्त्याउन सक्छ । यदि तपाईंले कान सफा गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि आन्तरिक फोहोर जम्मा भई एक दिन कान दुख्ने स’मस्या आइपर्छ । यसले कान सं’क्रमणको ख’तरा पनि छ । अधिक फोहोरका कारण, हामीलाई सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ र कहिलेकाँही असहनीय पीडा महसुस हुन्छ । यदि तपाईले लामो समय सम्म आफ्नो कान सफा गर्नु भएन भने कान दुख्न थाल्छ साथै कम सुनाइदिन्छ पनि त्यसैले आज हामी तपाईलाई आफ्नो कान सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचारहरुको बारेमा बताउँछौं । यी विधिहरू प्रयोग गरेर धेरै पैसा खर्च नगरी तपाईं आफ्ना कानहरू सफा गर्न सक्नुहुनेछ ।
पहिलो तरिका: पहिले आधा कप तातो पानी लिनुहोस् र यसमा एक सानो चम्चा नुन मिक्स गर्नुहोस् । त्यसपछि यसमा कपासको एउटा टुक्रा भिजाउनुहोस् र त्यस कपासको माध्यमबाट कपासमा भिजाएको पानीलाई कानमा निर्चोनुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि कि पानी राम्रोसँग भित्र जानुपर्दछ। त्यस पछि, कान फर्काउनुहस् र कानबाट सबै पानी निकाल्नुहोस् । दोस्रो: कानको फोहोर पनि बच्चाको तेलको सहायताले हटाउन सकिन्छ । यसका लागि, तपाईंले आफ्नो कानमा बेबि तेलको केही थोपा हाल्नुहोस् र कपास कपास लगाउनुहोस् । यसले छोटो समयमा तपाईको कानमा जमेको गरिएको कानेगुजीलाई नरम पार्दछ, ताकि कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँदछ ।
तेस्रो तरीका: समान मात्रामा हाइड्रोजन प्याराअक्साइड र केही थोपा पानी लिनुहोस् र कानमा राख्नुहोस् । जब यो कानमा राम्रोसँग जान्छ, केहि समय यसलाई छोडे पछि, कानलाई र्फकाउनुहोस् ताकि पानी बाहिर आओस् । ध्यान राख्नुहोस् कि हा’इड्रोजन प्या’राअक्साइडको मात्रा ३ प्रतिशत भन्दा बढि हुनु हुँदैन । कानको फोहोर पनि सजिलै यस प्रयोग द्वारा स’जिलैसँग हटाइन्छ । चौथो तरिका: कानको फोहोर पनि जैतुनको तेलले हटाउन सकिन्छ । यसको लागि, तपाईंले रातमा कानमा जैतून तेलको केही थोपा हाल्नुहोस् । करीव ३ देखि ४ दिन सम्म यो गर्नाले का’नको कानेगुजी नरम हुनेछ र कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँनेछ । हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
सु’त्नु अघि मात्रै २ मिनट गर्नुहोस यी काम पाउनुहुनेछ यस्तो च’मत्कार ! हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छन
Prevयी हुन् ग्यास्ट्रिक च्वा’ट पार्ने ६ घरेलु उपाय
Nextअनुहारको चाउ’रीपना हटाएर जवान देखिन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय